onekyat app ကိုဒေါင်းထားကြမယ်
onekyat မှ ကြိုဆိုပါသည်။
onekyat ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။
- onekyat သည် အသုံးပြုသူအား ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ် လုပ်ခွင့်ပြုထားသော နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူအကြား တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်မည် မဟုတ်ပါ။
- onekyat သည် ကြော်ငြာပစ္စည်း၏ အရည်အ သွေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်မှု တို့ကို မစစ် ဆေးပေးနိုင်ပါ။
- onekyat သည် မည်သည့် ပစ္စည်းမှမရောင်းပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပစ္စည်းရောင်းသူအား တာဝန်ခံခြင်းမရှိပါ။
- ကြော်ငြာများအားလုံး၏ ဖြစ်ပျက်လာမှု အကျိုးဆက်မှာ ရောင်းသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
- onekyat ပစ္စည်းရောင်းသူ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်မှု တို့ကို လည်း မစစ်ဆေးပေးနိုင်ပါ။
- သို့ဖြစ်ပါ၍ ပစ္စည်း လိမ်လည်မှုကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာပါက ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူနှစ်ဦးတွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။
- ပစ္စည်းလိမ်လည်မှု ကိစ္စများရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ပစ္စည်းမရမှီ ငွေကြိုပေးချေမှုများ မလုပ်ရန်လည်း တိုက်တွန်းပါသည်။
- onekyat ကို အသုံးပြုသူများသည် အနည်းဆုံး အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
- onekyat ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်မှတ်ပုံတင်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ် တို့၏ server မှာသိမ်းထားသည်ကို သဘောတူပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင်၏ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ မည်သူ့ကိုမှ မဖြန့်ဝေပါ။
- သင်၏ကြော်ငြာများအားလုံး၏ ဖြစ်ပျက်လာမှု အကျိုးဆက်မှာ သင်၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
- ကျွန်ုပ်တို့တွင် onekyat အသုံးပြုသူ မည်သူကိုမဆို ခဏဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ အသုံးပြုမှု ရပ်တန့်နိုင်သည့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကြော်ငြာအား အသိပေး၍ဖြစ်စေ အသိမပေးဘဲဖြစ်စေ အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
- onekyat အသုံးပြုသူများအားလုံး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မကြာခဏ စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူများအား နောင် အသုံးမပြုနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပါမည်။
onekyat ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို မပြုလုပ်ပါဟုလည်း ဝန်ခံပါသည်။
- ဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် ပစ္စည်းများ ရောင်းခြင်း။
- စည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း။
- ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခြင်း။
- သူတပါး၏ ပစ္စည်းအား ၄င်းတို့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ကူးယူခြင်း (သို့) ပြုပြင်ခြင်း။
- robot spider (သို့) automoated software များသုံး၍ onekyat ကို အသုံးပြုခြင်း။
- onekyat ကို အသုံးပြုနေသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအား ၄င်းတို့ မသိရှိဘဲ စုဆောင်းခြင်း။
- onekyat ၏ အချက်အလက်များအား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သို့) ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း။
onekyat ကို အသုံးပြုရာတွင် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် များမှာ အောက် ပါအတိုင်းဖြစ် သည် ။
- ကြော်ငြာကို သက်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် အနီးစပ် ဆုံး အမျိုးအစားအုပ်စု (category) ထဲတွင်သာ ထည့်ပါ။
- သင်၏ ကြော်ငြာ၊ လုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှု အတွက် အချက် အလက် များကို တတ် နိုင် သမျှ ပြည့် စုံစွာ ရေးပေးပါ။
- ကြော်ငြာဓာတ်ပုံသည် သင်တကယ်ရောင်းချမည့် ပစ္စည်းပုံ (သို့မဟုတ် ) ရောင်းချသောပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ပုံသာ ဖြစ်ရမည်။
- အချက်အလက် မပြည့်စုံ၊ မခိုင် လုံသော ကြော်ငြာများအား အမှန်တကယ် ရောင်းဝယ်လိုခြင်း မရှိဟု ယူဆကာ ပယ်ဖျက်ပါမည်။
- လုံခြုံဘေးကင်းမှုသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းအဝယ်အတွက် ပြင်ပတွင် တွေ့ဆုံလိုပါက လူစည်ကားရာနေရာ၊ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင် သောနေရာ များတွင်သာ တွေ့ဆုံပါ။
- ရောင်းသူ/ဝယ်သူ နှစ်ဦးတည်းရှိမည့်နေရာများတွင် မ တွေ့ပါနှင့်။
- ကျွန်ုပ်တို့တွင် ငွေပြန်အမ်းသော မူဝါဒ မရှိပါ။ ပစ္စည်း ကောင်း/မကောင်း၊ အတုအစစ် ဟုတ်/မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ မသိနိုင်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးအကြောင်းကြားပါက ကျွန်ုပ်တို့ တစ်စုံတစ်ခု လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဥပမာ၊ ထိုသူ၏ ကြော်ငြာအား ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ထိုရောင်းသူအား onekyat မှ ထာဝရ ထုတ်ပယ်ခြင်း အစသဖြင့်...)
- မိမိ တင်ပြီးသား ကြော်ငြာများအား ထပ်မတင်ပါနှင့်။
- ကြော်ငြာ တစ်ခုထဲအား အမျိုးအစားအုပ်စု (category) များစွာတွင် မတင်ပါနှင့်။
- အသေးစိတ် အချက်အလက် အားလုံးရေးပါ။ တခြား website၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား link သို့မညွှန်ပါနှင့်။
- သင်၏ ကြော်ငြာကို တခြားသူများ၏ comment အောက်တွင် မကြော်ငြာပါနှင့်။
- ရောင်းရန် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ကြော်ငြာများ မတင်ပါနှင့်။
- လိင်နှင့်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ မဖွယ်မရာ ပုံများမတင်ပါနှင့်။
- ဖုန်းနံပါတ်၊ ဈေးနှုန်း၊ အီးမေး များကို ခေါင်းစဉ်ထဲတွင် မရေးပါနှင့်။ ၄င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော နေရာများတွင် ရေးခြင်းဖြင့် သင်၏ကြော် ငြာကို ဈေးဝယ်သူများ အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ပြီး၊ သင့်အား ဆက်သွယ်ရန် ပိုမို လွယ်ကူမည် ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးဇူးပြုပြီး ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ အချင်းချင်း လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ။
- စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူသည် onekyat မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
- onekyat သည် ပြည်တွင်း app လေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် onekyat အား ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသော ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ရန် ဖန်တီးနေပါသည်။
- သို့ဖြစ်သောကြောင့် ရိုင်းစိုင်း သော မဖွယ်မရာ ကြော်ငြာများ တွေ့ရှိခဲ့ပါက onekyat ထဲတွင်ရှိသော "တိုင်ကြားမည်" မှဖြစ်စေ၊ support@onekyat.com သို့ အီးမေးပို့၍ ဖြစ်စေ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
For the safety and comfort of OneKyat users, our team pay extra attention that all ads posted respect our rules. In order to prevent your ad from being blocked or put on hold to be reviewed, please read the following rules carefully prior to posting an ad:
•	All Ads must be uploaded withaphoto, free of watermark (except for the jobs and services categories)
•	All Ads must have valid phone numbers
•	All products and services must be real, legally acquired (not stolen) and located in Myanmar (Burma)
•	Description of an ad must be clear and concise and the photo must match or clearly show the advertised item or service
•	Description of an ad cannot include links to third party websites
•	Multiple items in the same ad are not allowed: every item must be posted separately (except for sets e.g shoe and bag set, dining set etc.)
•	Doublets ads are forbidden: you cannot post an ad with the same content as another live ad
•	Unrealistic offers will be blocked
•	All items, products and services considered to be illegal in Myanmar (Burma) are prohibited. See list of illegal items below
•	Abusive content (offensive pictures or language) is forbidden
•	Ads seeking for friendship, relationship, donations or help are not allowed
Please note that the following items are prohibited on OneKyat
•	Weapons: Guns, knives and swords, explosives, teargas, brass knuckles, nightsticks, etc.
•	Drugs, Alcohol, narcotics, tobacco and other smoking related products
•	Fireworks and derivatives
•	Any pharmaceutical or medical product
•	Endangered species under any local or international laws and exotic plants and animals
•	Illegal/Pirated copies of software or audiovisual items, including memory cards or other storage devices. e.g. DVDs, CDs and books
•	Psychic services, Voodoo or Black magic and Tarot Services Horoscopes
•	Natural products that claim to cure diseases.
•	Explicit or adult content or services
•	Money Transactions - Ads offering the exchange of any legal tender.
•	Offers on how to make money fast
•	Clone Phone (iPhone, Samsung)
- စည်းကမ်းချက်များနှင့် မူဝါဒများမှာ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှု မှုဝါဒ
© 2018 - OneKyat. All rights reserved
onekyat app ကိုဒေါင်းမည်
လွယ်လွယ်ကူကူ ရောင်းကြဝယ်ကြ နိုင်ဖို့ onekyat app ကိုဒေါင်းထားရအောင်